PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2018-11-04 - UBrenda Mhlongo usecula umculo wokholo
UBrenda Mhlongo usecula umculo wokholo
Isolezwe ngeSonto - 2018-11-04 - EZOKUNGCEBELEKA - THOKOZANI NDLOVU DELI MNCWABE
OBENGUMLINGISI weGenerations: The Legacy, uBrenda Mhlongo edlala indawo kaNandi, uthe usethathe isinqumo sokungena emculweni wokholo njengoba engasalingisi ndawo.
Uthe usenezingoma eziyisikhombisa zomculo wokholo aziqophe nabaculi abehlukene.
Ukucula umculo wokholo, uthe yinto ayevele eyithanda kusuka esemncane, kodwa wakhetha ukungawuculi ngoba esaba ukuthi abantu bazomehlulela uma ecula wona.
“Inkinga ukuthi ngingumuntu oziqinele, bengizitshela ukuthi abantu ngeke bawemukele ngenxa yohlobo lomuntu engiwuyena. Akekho osake wathi umculo wokholo awungifanele kodwa bekuyimicabango ebenginayo. Ngenxa yokukhula ngokomqondo ngigcine ngibonile ukuthi kumele ngiwushintshe lo mcabango ngenze into engiyithandayo nengixhumanisa noNkulunkulu,” kusho uBrenda.
Okwamanje uthe ayikho inkampani asayine ngaphansi kwayo ngoba akafuni ukuxinwa ngokuthi akhiphe i-albhamu, futhi akafuni ukuphazanyiswa yinkontileka uma kuphinda kuvela ithuba lokulingisa ngoba usazimisele ngakho.
Uqhube wathi i-albhamu yakhe izophuma ngePhasika ngonyaka ozayo, futhi uzobe ezibiza ngoBrenda
Mhlongo kuyona ngoba udume ngokubizwa kanjalo.
Kule albhamu uthe usebenze nabantu abaningi.
“Kunengoma esiyiqophe noJumbo eyiGospel Maskandi. Kwezinye ngisebenze noZaza, Zolani Maseko, Mlu Mkhize kanti kukhona enye engizoyiqopha noMondli Ngcobo,” kuqhuba yena.
Uthe umculo wakhe ngeke ufaniswe nowomunye umculi wokholo ngenxa yokuthi usebenzise indlela acula ngayo emidlalweni yeshashalazi wenza iTraditional Gospel.
Uthe yikhona lokhu okumenza ahluke kwabanye abaculi bowokholo abakhona.
Ngaphandle komculo, uthe uphinde abe matasa neBrenda Mhlongo Worldwide Foundation egxile ekusizeni izingane ezihlala ezitaladini ukuthi zibuyisane nabazali bazo nezihlobo. Uthe usebenzisana nabefundisi baseThekwini.. USUNGENE kwezamabhizinisi umndeni wosaziwayo kwezokungcebeleka wakwaRanaka.
Lo mndeni uzakhele igama ngokuba nezelamani ezidume emisakazweni nasezinhlelweni zethelevishini.
Umndeni wakwaRanaka unohlelo iThe Ranakas oludlala kuMzansi Magic ngoLwesine ngo-8 ebusuku, usuvule indawo yokudla iLapeng La Ranaka eLeondale, e-East Rand, eGauteng.
Le ndawo okuqondwe ngayo ukumema imindeni esuke ifisa ukuzikhipha idle ngaphandle, izophinda ibe yingxenye yezindawo ezibonakala eziqeshini zohlelo iThe Ranakas.
Ngaphandle kwalokhu umndeni wakwaRanaka uveza ukuthi le ndawo iyimizamo yawo yokufaka isandla emphakathini ngokuqasha abantu abazosebenza kule ndawo.
UDineo on efilimini iBa ongumsakaz ukuthi le nda
USENGENE emculweni wokholo uBrenda Mhlongo obengumlingisi weGenerations: The Legacy Isithombe: SITHUNYELWE UMNDENI osuzakhele udumo ngohlelo iThe oludlala kwezamabhizinisi ngokuba nendawo yokudla eGauteng Isithombe: IN